April 2020 - Boga Wise Man
Waxa uu fadhiyey maqaaxi bunka laga cabo habeenkii oo dhalinyaradu ku caweyso. Waa fiid. Waxa u yaalay shaqooyin badan balse waa uu caajisay. Isagoon cidna u sheegin ayuu yimid kobtan uu fadhiyo. Si uu maskaxda u nasiyo waxa uu soo qaatay buug sheeko ah. Coffee ayuu dalbaday. Kursiga ayuu dib ugu fadhiistay. Maskaxdiisa ayuu kadib […]
Saaka muuqaal si aan u kas ahayn aan uga daawaday facebook ayaa waxa uu xambaarsanaa fariin aan la yaabay. Wadanka Australia ayaa ka cabanayay in lagu xanto inay yihiin wadan dadkoodu caqli xun yihiin ama aqoontoodu hooseyso. Sababta ugu weyn ee ay u cuskadeen waxay noqotay waxay eegeen saddexda waxyaabood ee ugu sareeya waxyaabaha Australia […]
Wuxuu kacay subaxaas xilli hore. 6.30 AM. Fikir badan oo bilo qaatay kadib waxa uu xalay go’aansaday inuu guursado. Wuxuu isagoo cadaygii afka ku sita dibada ula baxay laptop-kii. Waxa la gaadhay xiligii uu ku dhaqaaqii lahaa qorshihii uu labada sano diyaarinayay. Wuxuu furay folder-ka la yidhaa Future. Waxa ku jira 2 Excel file iyo […]